Moments leh saaxiibo 38
Waa maxay Dhadhanka Cuntada?
Dhadhamintu waa shaqo jirka ka mid ah oo loo diwaangaliyo qiimayaasha iyo tayada dareeraha iyo cabitaannada. Cuntada dhadhamin maahee ilaa biyuhu cuntada la wadaagaan carrabka. Sida ugu dhakhsaha badan ee biyaha, qoyaanka, candhuufta, ayaa u keenay cuntada xiriir carrab la leh, unugga dhadhanka, dareemeyaasha carrabka ayaa isla markaaba gaarsiiya qaabka jirka dareenka cuntada. Biyo la’aan si ay u sameeyaan iskuxirka u dhexeeya cuntada iyo dareemeyaasha carrabka, dareemayaasha ma gaarsiin karaan dareenka cuntada qaab jirka ah jirkuna muu buuxin karin shaqadiisa dhadhanka.
Waxa jira xidhiidh dabacsan oo ka dhexeeya jirka oo leh tayo dhadhan, dareemayaasha iyo qaabka jirka, iyo biyo. Xiriirka khiyaanada leh waa isku xirnaanta sababa labada qaybood ee hydrogen iyo hal qeyb oksijiin inay noqdaan waxa aan ugu magacdarnay biyo, kaasoo ka duwan labada astaamo ee hydrogen ama oksijiin oo biyuhu ka kooban yihiin. Qeybo cunto ah ayaa ku jira biyo. Boondhiga isku keenaya labada gaas inuu soo saaro biyo waa isku xirnaan qarsoodi ah oo mideeysa cuntada, dareemeyaasha carrabka, biyaha, iyo jirka.
Markasta oo biyaha jidhka ahi la xidhiidhaan maqaal cunto ah carrabka, sheyga khiyaanada leh ee biyaha ayaa jira isla markaana ku dhaqma isla mar ahaanta jidhka qaab, haddii neerfaha carrabka ay xidhiidh leeyihiin. Maaddada jilicsan ee biyaha ku xiriirta cuntada carrabka waa isku mid biyaha iyo cuntada iyo carrabka iyo dareemeyaasha. Qaybtaas khiyaanada leh ayaa ah tan dhabta ah, waa waxyaabaha taabashada ee circa. Biyaha aan ognahay waa kaliya muujinta bannaanka iyo muujinta biyaha shaybaarka khiyaanada leh. Biyo-hoosaadkaani waa shayga ay jirka qaabkiisu laf ahaantiisa ka kooban yahay.
Dhadhamiya waa shaqo ka mid ah jirka qaabkan oo iskiis u qaadanaya iyada oo loo adeegsado aalimadeeda aalnimada suugaanta ama tayada cuntada ku jirta. Dhadhamintu waa shaqada jirka qaabkeeda, laakiin maahan shaqada kaliya. Dhadhamintu waa mid ka mid ah dareenka. Jidhka qaabkiisu waa fadhiga dareenka oo dhan. Jidhka qaabkiisu wuxuu diiwaangeliyaa dhammaan dareennada. Dareenka dareemada ayaa la soo dersa ninka oo keliya qaab dhismeedka jirka. Jidhka qaabkiisu wuxuu la xidhiidhaa dareen kasta kan kale. Ujeeddada laga leeyahay dareenka ayaa ah in mid kastaa uu wax ku kordhiyo wanaagga guud ee jirka, in jirku u noqon karo qalab ku habboon oo loo adeegsado kobcinta maskaxda. Ujeedada dhadhanka waa in iyada qaab ahaan ay u diiwaan galiso dareenka ay soo saartay cuntada si ay u kala sooci karto iyaga una diido cuntada sida aan loo baahnayn oo waxyeello u leh, oo ay doortaan kaliya sida ugu habboon ee loo adeegsado maskaxda. dhismaha iyo dayactirka qaab dhismeedka jirka iyo qaabka jirka.
Dhadhaminta waxay ku hagi doontaa ragga iyo xayawaannada qaarkood cuntada ay yihiin kuwa ugu baahida badan uguna faa'iidada badan jirka, haddii ragga iyo xayawaankaas ay ku noolaan lahaayeen hab caadi ah oo dabiici ah. Laakiin raggu ma ahan wax caadi ah oo dabiici ah, xayawaankuna ma wada aha, sababa la xiriira saameynta uu bini'aadamka bini-aadamka u keenay oo ku keenay.
Dareenka urta ayaa aad ugu dhow inuu la xiriiro cuntada iyo dhadhaminta mid kasta oo ka mid ah dareemayaasha kale maxaa yeelay urta ayaa si toos ah ula shaqeysa oo u dhiganta arrimaha jirka, cunnaduna waxay ka kooban tahay cunsuryada gala galaaska arrimaha jirka.
Miyuu dhadhamiyaa cuntada qiimo kasta sida nafaqada marka laga reebo cuntada?
Waxeey heesataa. Cuntada guud waxay nafaqo siisaa jirka jirka. Cilmiga sixir bararka, biyaha, ee hadda loo tixraacay, ayaa nafaqo u leh jidhka qaab ahaan jir ahaan. Dhadhanka sheygan sixirku waa nafaqo u leh shay saddexaad oo ku dhex jira gudaha iyo jirka qaabkiisa. Bini’aadamka, sheygan saddexaad wali ma ahan qaab, in kasta oo lagu muujiyo qaabab gaar ah noocyada xayawaanka. Waxyaabahan saddexaad oo ah waxa cuntada lagu helo ee dadku ka helo waxa ku jira dhadhanka cuntadu waa damac. Rabitaanku wuxuu gaaraa dareenka wuxuuna u isticmaalay inuu isagu laftiisa ku soo jiito qanacsanaanta dhammaan dareennada ay awoodaan. Dareen kasta ayaa sidaas u adeegaya rabitaanka. Si kastaba ha noqotee, dareenka gaarka ah ee u dhigma damaca, iyo rabitaanku wuxuu adeegsadaa inuu iskula xiriiro dareenka kale, waa taabasho ama dareen. Marka rabitaanku wuxuu isku xirmaa taabashada taabashada, dhadhanka wuxuu kusocdaa dareenka dhadhanka a1l raaxada uu kaheli karo cunnooyinka dhadhanka. Haddii qaabka loo oggol yahay inuu guto howshiisa dhadhanka isaga oo aan u hoggaansanayn baahiyaha rabitaanka, wuxuu si otomaatig ah u dooranayaa cuntooyinka noocan oo kale ah maadaama ay u baahan tahay inay joogteyso qaabkeeda iyo qaab dhismeedka jir ahaaneed. Laakiin qaabka jirku looma oggola inuu doorto cuntada ugu badan ee loo baahan yahay. Rabitaanku wuxuu xukumaa jirka qaabkiisa wuxuuna u adeegsadaa inuu ku kasbado qancinta dareenka uusan heli karin iyada oo aan la helin qaabka jirka. Dhadhanka oo inta badan ka farxiya rabitaanka, rabitaanku wuxuu ku baahan yahay qaab jidh, iyo nin, wuxuu khiyaameeyay inuu rumaysto in rabitaanku yahay mid isaga u gaar ah, wuxuu awoodaa inta ugu badan ee uu kari karo siinta cunnooyinkaas oo si aan macquul ahayn ugu dalbado dhadhanka. Sidaas darteed dhadhanka waxaa loo kobciyaa si loo damiyo rabitaanka, hilibka xayawaanka ee aan caqli gal ahayn, kaas oo qayb ka ah samaynta qofka. Iyada oo la siinayo baahiyaha rabitaanka iyada oo loo maro cuntada dhadhanka ayaa jidhka la galiyaa oo wax u dhimaya dayactirkiisa, isla markaana wakhtiyada ay xaaladdiisu caadi tahay kacsan tahay oo natiijooyin caafimaad ka yimaaddaan. Gaajada waa inaan lagu khaldin dhadhanka. Gaajo waa damaca dabiiciga ah ee xayawaanka si loogu qanco baahiyaheeda. Dhadhamiya waa inay ahaato dariiqa xayawaanku u dooran karo cunnooyinka looga baahan yahay dayactirkiisa. Xayawaankan ku nool gobolka duurjoogta ah, kana fog saameynta dadka, ayaa sameyn doona. Xayawaanku ninku, ninku had iyo jeer wuu jahwareeraa ka dibna isku gartaa naftiisa. Waqtiyadi dhadhanka dhadhanka cuntada ayaa la beeray. Rabitaanka ama xayawaanka ku jira bani-aadamka waxaa lagu quudiyaa dhadhanka khiyaanada leh ee cuntada, xayawaanku wuxuu jabayaa jirka qaabkiisa waxayna ka hortagtaa inuu guto howlihiisa dabiiciga ah ee ku saabsan dayactirka caafimaadka jirka guud ahaan iyo u adeegida kayd ahaan. nolosha oo ninku wici karo si loogu isticmaalo shaqadiisa adduunka.
Dhadhamintu waxay leedahay qiimo marka laga reebo cuntada. Qiimihiisu waa kobcinta rabitaanka, laakiin waa inaad siisaa kaliya nafaqada ay u baahan tahay, iyo inaadan kordhinin xooggeeda wixii jirka qaabkiisu awoodi karo.